Sinovac ကာကွယ်ဆေးအပေါ် အခြေအမြစ်မရှိဝေဖန်မှုအား ထိုင်းအဆင့်မြင့်အရာရှိ သတိပေး - Xinhua News Agency
ဘန်ကောက် ၊ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
Sinovac ကာကွယ်ဆေးအပေါ် သတင်းအချက်အလက်အမှားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ထိုင်းနေ့စဉ်သတင်းစာတစ်စောင်က ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။Sinovac ကာကွယ်ဆေး၏ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအမှားကို အတိုက်အခံက နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အသုံးချကာ အချက်အလက်များကို ပုံဖျက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Don Pramudwinai ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ တရုတ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် Shijie Ribao က ဖော်ပြခဲ့သည်။
“Sinovac ကာကွယ်ဆေးအပေါ် ဝေဖန်မှုက အချက်အလက်တွေကို လိမ်လည်ရုံတင် မဟုတ်ဘူး ။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ထိခိုက်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။Sinovac ကာကွယ်ဆေးအား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အခြားနိုင်ငံ ၃၉ နိုင်ငံက အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုထားကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေး အလျှင်အမြန် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံများစွာအား ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ကပ်ရောဂါ အစောပိုင်းအဆင့်ကို ကျော်လွှားနိုင်ရေး ကူညီခဲ့ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Don Pramudwinai က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူသန်းရာချီ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသည်နှင့်အတူ Sinovac ကာကွယ်ဆေးသည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှုများ ကာကွယ်ရာတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ် သို့မဟုတ် လုံးဝမရှိသည်နှင့်အတူ အစွမ်းထိရောက်မှုအား သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးများစွာသည် စမ်းသပ်ဆဲအဆင့် နှင့် အရေးပေါ်သုံးဆွဲရန်အတွက် စတင်ကတည်းက အဓိကရွေးချယ်မှုစံများအနက် တစ်ခုအဖြစ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အမြင့်ဆုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Don Pramudwinai က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
Thai senior official warns against baseless criticism of Sinovac vaccine
BANGKOK, Sept.7(Xinhua) — False information on the Sinovac vaccine could harm the relationship between Thailand and China,aThai newspaper quotedalocal senior official as saying on Monday.
Misinformation used by the opposition about the quality of the Sinovac vaccine has beenadistortion of facts to serve political purposes, Thai Deputy Prime Minister and Foreign Minister Don Pramudwinai was cited in the Chinese-language newspaper Shijie Ribao as saying.
“The criticism over the Sinovac vaccine not only twists facts, but also hurts the friendly relationship between Thailand and China,” the minister said.
“The Sinovac vaccine has been granted emergency use by the World Health Organization and 39 other countries around the world,” Don said. “China has the capabilities to produce the vaccine quickly and has helped many countries including Thailand overcome the early phase of the pandemic by providing the vaccine.”
With hundreds of millions of people being vaccinated worldwide, the Sinovac vaccine has proved effective in preventing COVID-19 infections with few or no side effects, he added.
Don further noted that the Thai government also considers high safety as one of the main selection criteria, since many COVID-19 vaccines are “at the experimental phase and only for emergency use.” Enditem
Photo – A woman receives the COVID-19 vaccine in Bangkok, Thailand, on Aug. 26, 2021. Thailand registered 18,501 new COVID-19 cases on Thursday, the fifth consecutive day of less than 20,000 infections, as the country mulls to ease some restrictions in Bangkok and some provinces. (Xinhua/Rachen Sageamsak)